COVID-19 ၊ စီးပွားရေး ပြန်လည်နလံထူရေး အာဂျင်တာများနှင့်အတူ အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ စတင် - Xinhua News Agency
ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန် ၊ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံက ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ၃၈ ကြိမ် နှင့် ၃၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် စီးပွားရေးပြန်လည်နလံထူအောင် မြှင့်တင်ရေးက ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်(အာဂျင်တာ)ထဲတွင် အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများကို “ We Care, We Prepare, We Prosper” ကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်မယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်မယ် ၊ ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်မယ် ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါမှ ဒေသတွင်း ပြန်လည်နလံထူရေးကိုဦးတည်ကာ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ပြန်လည်နိုးထရေး ရှေ့ဆက်တွန်းအားပေးမြှင့်တင်ရန် ၊ ဘုံစိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာတွင် အာဆီယံ၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကို မြှင့်တင်ရန် ၊ မျှဝေခံစား အကျိုးစီးပွားများအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များ အမိအရဆုတ်ကိုင်ရန် နှင့် ဒေသတွင်း ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်အောင် ဦးတည်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် စသည်တို့အပါအဝင် အရေးကိစ္စရပ်များစွာကို ဆွေးနွေးသွားကြမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။
ယနေ့အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်အတွက် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်တွင် ၃၈ ကြိမ် နှင့် ၃၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ နှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများကို ASEAN’s dialogue partners အာဆီယံဆွေးနွေးမှုမိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ ဦးဆောင်နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် တရုတ် ၊ ဂျပန် ၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ အိန္ဒိယ ၊ အမေရိကန် ၊ ဩစတြေးလျ ၊ ရုရှား နှင့် အခြားနိုင်ငံများအပါအဝင် ပူးတွဲကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည့် ASEAN အာဆီယံအသင်းကြီးတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအဖြစ် ဘရူနိုင်း ၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ လာအို ၊ မလေးရှား ၊ မြန်မာ ၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ စင်ကာပူ ၊ ထိုင်း နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်ကြသည်။ ဘရူနိုင်း နိုင်ငံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌ နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BANDAR SERI BEGAWAN, Oct. 26 (Xinhua) — Member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on Tuesday kick-started their 38th and 39th summits under the chairmanship of Brunei via virtual conference, with fighting the COVID-19 pandemic and promoting economic recovery high on the agenda.
Photo- The Flag of the Association of Southeast Asian Nations. /CFP